PacCoin စျေး - အွန်လိုင်း PAC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PacCoin (PAC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PacCoin (PAC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PacCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 523 579.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PacCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PacCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PacCoinPAC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000346PacCoinPAC သို့ ယူရိုEUR€0.000293PacCoinPAC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000265PacCoinPAC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000315PacCoinPAC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00308PacCoinPAC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00218PacCoinPAC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00766PacCoinPAC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00129PacCoinPAC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000458PacCoinPAC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000484PacCoinPAC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00768PacCoinPAC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00268PacCoinPAC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00186PacCoinPAC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0259PacCoinPAC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0584PacCoinPAC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000475PacCoinPAC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00053PacCoinPAC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0108PacCoinPAC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0024PacCoinPAC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.037PacCoinPAC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.41PacCoinPAC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.134PacCoinPAC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0253PacCoinPAC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00951
PacCoinPAC သို့ BitcoinBTC0.00000003 PacCoinPAC သို့ EthereumETH0.0000009 PacCoinPAC သို့ LitecoinLTC0.000006 PacCoinPAC သို့ DigitalCashDASH0.000004 PacCoinPAC သို့ MoneroXMR0.000004 PacCoinPAC သို့ NxtNXT0.027 PacCoinPAC သို့ Ethereum ClassicETC0.00005 PacCoinPAC သို့ DogecoinDOGE0.0999 PacCoinPAC သို့ ZCashZEC0.000004 PacCoinPAC သို့ BitsharesBTS0.0107 PacCoinPAC သို့ DigiByteDGB0.0111 PacCoinPAC သို့ RippleXRP0.00123 PacCoinPAC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 PacCoinPAC သို့ PeerCoinPPC0.00115 PacCoinPAC သို့ CraigsCoinCRAIG0.158 PacCoinPAC သို့ BitstakeXBS0.0148 PacCoinPAC သို့ PayCoinXPY0.00604 PacCoinPAC သို့ ProsperCoinPRC0.0434 PacCoinPAC သို့ YbCoinYBC0.0000002 PacCoinPAC သို့ DarkKushDANK0.111 PacCoinPAC သို့ GiveCoinGIVE0.75 PacCoinPAC သို့ KoboCoinKOBO0.0789 PacCoinPAC သို့ DarkTokenDT0.000319 PacCoinPAC သို့ CETUS CoinCETI1
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 07:50:02 +0000.